China Judah Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 zvakatipoteredza zvine hunyanzvi lime lime yezvigadzirwa zvemitsara fekitori uye vagadziri | Judha
Technical parameter uye tafura yekuita
Lime ibwe indekisi zvinodiwa
Chinhu Chiri Mukati
Uniform uye yakachena saizi
Hapana poda yedombo, hapana dope reyero padombo pamusoro
Marasha indekisi zvinodiwa
Net Calorific Kukosha
1-3cm - 2-4cm
Hapana marasha eupfu
Lime yemhando yepamusoro
caustic pasoda /%
Chiitiko / mL
1, Iyo yakagadzirirwa kugadzirwa kugona ndeye 100-300 matani ekukurumidza lime pazuva. Iyo dhiraini dhayamita yemuviri inosarudzwa kuve 4.0 -6.0meters, iyo yekunze dhayamita iri 6.5 -8.5meters, iyo inokwana kureba kwemuviri wemoto ndeye 30-33 metres uye hurefu hwese i38-45meters.
2, mbishi matombo uye marasha anobva kumigodhi iri pedyo uye migodhi iyo inogona kudzikisa mutengo wekufambisa.
3, Stone PARTICIPLE saizi: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4, Dombo uye marasha vanoyerwa nenzira kwayo nekuyera maseru.
5, Izvo zvinhu zvinopesana mune ino zano ndeimwe yakatetepa ye firebrick + imwe nhete yezvidhinha zvitsvuku + imwe nhete yealuminium silicate fiber yakanzwa + mvura slag.
6, Iyo guruva uye utsi hune guruva rinotora iyo guruva kubvisa maitiro edutu guruva muteresi + bhegi-mhando guruva muteresi + mvura firimu desulphurization guruva muteresi. Mushure mekurapwa, guruva rinoburitswa mukuomerera zvinoenderana nemitemo yekugamuchirwa yemuno.
7 、Iyo bhajeti inotangira kubva kubatch bucket (kutanga) kusvika lime kuburitsa bhandi (mira), kusingaite hwiro yemoto, batching hwaro uye yemagetsi kudzora imba
Batcher system: ibwe uye marasha zvakateedzana kuendeswa kudombo uye marasha cache migomo nemabhanhire; Dombo rinorema rinobva rapinzwa mubhanhire rekuvhenganisa kuburikidza neye feeder.Iyo yakayerwa marasha inopinda mubhandi rekusanganisa kuburikidza neyakagadzika bhandi feeder.
Feeding system: dombo nemarasha zvakachengetwa mubhanhire rakasanganiswa zvinotakurwa kuenda kune hopper, iyo inoshandiswa newavha kuita iyo hopper kutenderera kumusoro nekudzika kwekudyisa, iyo inovandudza huwandu hwekutakura uye inowana kugona kwakanyanya uye kuchengetedza simba.
Lime zvaikosha hurongwa: mushure iyo calcined lime dombo rakatonhora, iro rakapedzwa lime rinoburitswa kune iro raimu rinoburitsa bhandi neane-mativi ekudzikisa muchina uye zvikamu zviviri zvemhepo yekuvhara vharuvhu. Mukana wekubvisa-pfuti, iko kutungamira uye huwandu hweremi inoburitswa inogona kugadziriswa kuti ibudirire-kupfura uye yakakosha-kudhonza.
Guruva kubvisa sisitimu: mushure mekukonzera dhizaini fan, iro guruva rine utsi uye gasi kutanga kuburikidza nedutu reguruva muteresi kubvisa zvidimbu zvakakura zveguruva; Wobva wapinda muhomwe firita kuti ubvise zvidiki zvidiki zveguruva; Mushure mekupinda mumvura firimu precipitator, iyo flue gasi rinokwesha pamusoro pefirimu remvura nguva dzese, uye mweya weguruva unonyoroveswa. Ichapinda pasi peguruva precipitator nekuyerera kwemvura uye inozoburitswa mutsementation tangi. Mushure mekunaya, mvura yakachena ichagadziriswa zvakare.
Electric control system: kutora chiGerman Siemens komputa yekudzora sisitimu, yakazara otomatiki yekugadzira tambo, yekupedza-mutengo, yakatsiga chigadzirwa mhando.
Pashure: Juda kiln -300T / D yekugadzira mutsara -EPC chirongwa
Zvadaro: Judah kiln -200T / D 3 yekugadzira mitsara -EPC chirongwa
Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira,